တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူတင်အာကာသယာဉ်Shenzhou-13 အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် လွှတ်တင်မည်ဖြစ် - Xinhua News Agency
ကျိုချွမ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
Shenzhou-13 လူတင်အာကာသယာဉ်ကို တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုချွမ် ဂြိုလ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် ပေကျင်းစံတော်ချိန် ၀၀:၃၀ မိနစ်တွင် လွှတ်တင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ လူတင်အာကာသယာဉ်အေဂျင်စီ (CMSA)က ကြာသပတေးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏အာကာသစခန်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် အဆိုပါယာဉ်တွင် ကျိုက်ကျစ်ကန်း၊ ဝမ်ရာဖိန်၊ ယဲ့ကွမ်းဖု အာကာသယာဉ်မှူး ၃ ဦး လိုက်ပါသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း CMSA လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး လျင်ရှီးချန်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Shenzhou-13 လူတင်အာကာသယာဉ်နှင့် Long March-2F သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံအတွဲအား ယာဉ်လွှတ်တင်ရေးနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် ပြင်ဆင်နေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အာကာသယာဉ်မှူးများသည် အာကာသတွင် ၆ လကြာနေထိုင်သွားမည်ဖြစ်ရာ ၎င်းမှာ တရုတ်အာကာသယာဉ်သမိုင်းတွင် နေထိုင်သည့်အချိန် အကြာရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် Shenzhou-13သည် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းရှိ အာကာသစခန်း ပင်မခန်း Tianhe လျင်မြန်စွာ အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ရာ Tianheနှင့်အတူ ကုန်တင်အာကာသယာဉ်များဖြစ်ကြသည့် Tianzhou-2၊ Tianzhou-3 တို့နှင့် ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Shenzhou-13 အာကာသယာဉ်မှူးများသည် အာကာသစခန်းပင်မခန်းတွင် ၆ လကြာနေထိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေ၏အချိန်ဇယားအတိုင်း နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လျင်ရှီးချန်က ဆိုသည်။
Shenzhou-13ကို လက်ရှိပျံသန်းရေးမစ်ရှင်အတွက် ပြင်ဆင်နေသည့် Long March-2F သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံနှင့် လွှတ်တင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လျင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ （Xinhua）
#China, #Shenzhou-13, #launch, #SpaceStation，#xinhua, #xinhuamyanmar, #တရုတ်, #ဆန်ကျိုး-၁၃, #လူတင်အာကာသယာဉ်, #အာကာသစခန်း, #ဆင်ဟွာ
1st LD: China to launch Shenzhou-13 manned spaceship on Oct. 16
JIUQUAN, Oct. 14 (Xinhua) — The Shenzhou-13 manned spaceship will be launched at 12:23 a.m. Saturday (Beijing Time) from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, announced the China Manned Space Agency (CMSA) on Thursday.
The launch will be carried out withaLong March-2F carrier rocket, which is being filled with propellant, Lin said. Enditem
Photo 1 – Chinese astronauts Zhai Zhigang (C), Wang Yaping (R) and Ye Guangfu will carry out the Shenzhou-13 spaceflight mission, and Zhai will be the commander, announced the China Manned Space Agency atapress conference on Oct. 14, 2021. (Xinhua)
Photo2– (211007) — JIUQUAN, Oct. 7, 2021 (Xinhua) — The combination of the Shenzhou-13 manned spaceship andaLong March-2F carrier rocket prepares to be transferred to the launching area of Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, Oct. 7, 2021. (Photo by Wang Jiangbo/Xinhua)
Photo3– (211007) — JIUQUAN, Oct. 7, 2021 (Xinhua) — The combination of the Shenzhou-13 manned spaceship andaLong March-2F carrier rocket prepares to be transferred to the launching area of Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, Oct. 7, 2021. (Photo by Wang Jiangbo/Xinhua)